Nampitaraina ireo mponina ny nahita ireo fiara nandalo nosakanana hitondra ny naratra mafy izay nahatratra 14 fa lasa nirifatra avokoa, mahakasika ny lozam-piarakodia tany amin’ny distrikan’i Betafo. Nitrangana lozam-pifamoivoizana mantsy ny 12 jolay teo tao Betafo Antsirabe. Sahabo ho tamin’ny 3 ora tolakandro latsaka, nifandona ny fiara marika « Toyota » sy « 504 peugeot » teo Antovontany, lalam-pirenena faha-34.
Araka ny fampitam-baovaon’ny zandary Ankadilalana, tao amin’ny kaominina Alakamisy Anativato no nitranga ny loza. Toerana izay ivelan’ny tanàna fa somary ahitana fidinana. Samy nandeha mafy izy ireo izao nifandona izao, izay heverina fa vokatry ny tsy fitandreman’ny mpamily roa tonta. Samy avy any amin’ny faritra Vakinankaratra ny mpanamory. Nentina tao amin’ny hopitalibe Andranomadio ao Antsirabe avokoa ireo naratra, ka efatra no tena nahiana ny ainy. Ny zandary misahana ny fifamoivoizana ny renivohitry ny faritra Vakinankaratra no nandray an-tanana ny raharaha. Araka ny voalazan’ny mponina any an-toerana, raha tsy ny zandary mihitsy no nanakana ireo fiara nandalo, tsy nisy nety nitondra ireo marary niharan-doza.